Indlu yabucala kwindawo entle kwi-idyllic Obersee
Ifakwe ngokuthe ngqo kwindawo yolonwabo ye-Obersee kwiziko lelali enomtsalane eSchmerikon. Igumbi labucala elithokomeleyo kwindlu eneentsapho ezimbini. Indawo yokuhlala iphakathi kwaye ithule, kufutshane nesikhululo sikaloliwe kunye nechibi (2min walk).
Le ndawo ifanelekile kuhambo olude, ukunyuka, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela inqanawa okanye ukuqubha echibini. Imisebenzi yezemidlalo efana ne-skiing/snowboarding kunye ne-cross-country skiing inokufikelelwa kwimizuzu engama-30.
Indlu encinci kodwa entle ikulungele ukuphumla kwababini. Inegumbi lokuhlala elikhulu elinedesika, igumbi lokulala elitofotofo elinocango lokutyibilika, ikhitshi elinendawo yokutyela kunye negumbi lokuhlambela elineshawari. Isihlalo esisemva kwendlu phambi kwegadi sinokwabelwana ngaso. Ukuba kuyimfuneko, umatrasi owongezelelweyo unokubonelelwa ngabantu ababini.
Kuba indlu indala, ukuphakama kwesilingi, okanye ngakumbi imiqadi, iphantsi kancinci - ngaphezulu kwe-1.90cm kufuneka ugobe kancinci.
Iindwendwe zinokufikelela ngokuthe ngqo kwigumbi kwaye zinokuyisebenzisa ngesitshixo sazo.
Sihlala kwindlu enye kodwa sinokufikelela okwahlukileyo. Ngoko ke kulula ukufikelela kwaye sinokuba kwindawo ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka ukuba unayo nayiphi na imibuzo / iinkxalabo. Iindawo zokupaka ziyafumaneka kwisikhululo sikaloliwe esinemitha yokupaka.
Le ndlu ikwiziko lelali endala (kufutshane necawe), ingqongwe zezinye izindlu ezindala.
Ngexesha lokuhlala kwakho, unokufumaneka ngcono nge-whatsapp, umyalezo obhaliweyo okanye i-imeyile.